(၁၀၅)မိုင် ကုန်သွယ်ရေးဇုန်သို့ သွင်းကုန်ယာဉ်များသာဝင်ရောက်ပြီး ပို့ကုန်ယာဉ်ဝင်ရောက်မှုအလွန်နည်းပါး လျက်ရှိနေနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မူ ပုံမှန်မဖြစ်သေးဟုဆို - Yangon Media Group
(၁၀၅)မိုင် ကုန်သွယ်ရေးဇုန်သို့ သွင်းကုန်ယာဉ်များသာဝင်ရောက်ပြီး ပို့ကုန်ယာဉ်ဝင်ရောက်မှုအလွန်နည်းပါး လျက်ရှိနေနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မူ ပုံမှန်မဖြစ်သေးဟုဆို
ရန်ကုန်၊ ဩဂုတ် ၂၅ – ရှမ်း ပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း) မူဆယ် (၁၀၅)မိုင် ကုန်သွယ်ရေးဇုန်တွင် သွင်းကုန်ယာဉ်အစီးရေ (၅၀ဝ)ခန့်ဝင်ရောက်မှုရှိနေသော်လည်း ပို့ကုန်ယာဉ်များဝင်ရောက်မှုမှာ အလွန်နည်းပါးလျက်ရှိနေပြီး မြန် မာ-တရုတ် နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်စီး ဆင်းမှုမှာလည်း ပုံမှန်မဖြစ်သေး ကြောင်း ကုန်တင်ယာဉ်မောင်းများ ဆီမှ သိရသည်။
ပို့ကုန်ကားများတွင် ငါးရှဉ့် နှင့် ကဏန်းကားအနည်းငယ်သာ ဝင်ရောက်လျက်ရှိနေပြီး ကုန်သွယ် မှုပုံမှန်မဖြစ်သေးသည့်အတွက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ အပါအ ဝင် ထိုလုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်စပ် လုပ်ကိုင်နေကြသူများအနေဖြင့် နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများရှိနေသည်ဟု သိရသည်။
]]ကုန်သွယ်ရေးဇုန်ထဲကို ရောက် နေတာ အခုဆိုရင်ငါးရက်လောက် ရှိပြီ။ အခက်အခဲတွေကတော့ အများကြီးပေါ့။ ကျွန်တော်တို့အ နေနဲ့ ကားခတွေနစ်နာဆုံးရှုံးမှု ရှိသလို ကုန်သည်တွေအတွက်ပါ ထိခိုက်ပါတယ်}}လို့ ကုန်တင်ကား မောင်းသူ ဦးမြင့်နိုင်က ပြောသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် ကုန်သွယ် ရေးဇုန်မှ ကုန်ကားများထွက်၍ မ ရသေးသည့်အတွက် ယာဉ်မောင်း များမှာ စားဝတ်နေရေး အခက်တွေ့ နေရသည့်အတွက် မူဆယ်မြို့ခံ စေတနာရှင်များက ပရဟိတအသင်း အဖွဲ့များမှ နေ့စဉ်လာရောက်လှူ ဒါန်းလျက် ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
“ကျွန်တော်တို့ တရုတ်ဘက် ကနေ ကုန်ပစ္စည်းတွေတင်ပြီး ထွက် လာတာ အခုဆိုရင် ကုန်တွေကို လည်း အစစ်ဆေးခံပြီးပါပြီ။ ဂျူတီ လည်း ဆောင်ပြီးပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ အခုထိ ထွက်မရသေးဘူး။ ဒီလိုပဲ ဆက်နေရဦးမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန် တော်တို့အတွက် အခက်အခဲအ များကြီးရှိနိုင်ပါတယ်”လို့ ကုန်ကား ယာဉ်နောက်လိုက်တစ်ဦးဖြစ်သူ မောင်မြတ်သိန်းကျော်က ပြောသည်။
သွင်းကုန်အဖြစ် ဝင်ရောက် လာသည့် ကုန်ပစ္စည်းများကို ကုန် ကားကွင်းဝင်းတွင် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်နေသည့် အကောက် ခွန်ဝန်ထမ်းများနှင့် ကုန်သွယ်ရေး ဦးစီးဌာမှ တာဝန်ရှိသူများအပါ အဝင် ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ကုန်တင်၊ ကုန်ချအလုပ်သမားများ က နယ်မြေအခြေအနေကောင်း လျှင် အဆင်သင့်ထွက်နိုင်ရန် လို အပ်သည်များကို ကြိုတင်ပြင်ဆင် လုပ်ဆောင်ပေးထားကြောင်း သိ ရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဩဂုတ် ၁၅ ရက် က စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် တိုက်ပွဲ များကြောင့် မန္တလေး-မူဆယ် လမ်းပိုင်းတွင် လုံခြုံစိတ်ချမှုမရှိ သေးသည့်အတွက် ကုန်တင်ယာဉ် များအပါအဝင် ခရီးသည်တင်ယာဉ် များလည်း သွားလာရေးခက်ခဲလျက် ရှိနေသည်ဟု သိရသည်။
တိုက်ပွဲများကြောင့် ပိတ်ထားသည့် ကွတ်ခိုင်-နမ့်ဖက်ကာကားလမ်းပိုင်း ပြန်ဖွင့်ပြီ
လမ်းပိတ်ဆို့မှုဖြစ်ပွားနေသည့် ဘားအံ-ကော့ကရိတ်-မြဝတီလမ်းပိုင်း၌ ဘားအံ-မြဝတီ အတက်ယာဉ်များနှင့် မြဝတီ-ဘားအံအဆင်းယာဉ်များကို ဦးစားပေးစေလွှတ်နေ
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေပြည်တော်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိ
တရုတ်ယွမ်နှင့် ဂျပန်ယန်းငွေကို နိုင်ငံတကာငွေပေးချေမှုနှင့် စာရင်းရှင်းလင်းမှုများ ဆောင်ရွ??
နိုင်ငံရေး ပါတီဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီ၏ ရန်ပုံငွေတွင် ပြည်ပ အထောက်အပံ့ လုံးဝမပါဟု ဦးကိုကို??
မူးယစ်မှုဖြင့် ထောင်ဒဏ်ကျခံနေသည့် သရုပ်ဆောင် မိုးအောင်ရင်၏ အယူခံ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက်တွင် အမိန